High Five Summer Session
Blended General and GEMS-GISE-STEM Academy (Current Gr K-7) Summer Session
Fast Track Scholars
High School Summer Session Programs
Non MPS Student Registration & Continuous Learning Plan
Home > Fast Track Scholars > SOMALI
FAST TRACK SUMMER SESSION
JUNE 15, 2020 - JULY 23, 2020
U Gudbitaanka Dugsiga Sare & Diyaargarowga
Ku soo dhowow barnaamijka Fast Track Program! Barnaamijkaan waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo inay si fudud ugu gudubto ardayda dugsiga dhexe oo ugu gudubaan dugsiga sare. Koorsadaan gaarka ah waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo in arday kasta uu diyaar u yahay inuu ku guuleysto dugsiga sare iyo kooleejka labadaba. Fasalkaani wuxuu ku siin doonaa aaladda aad ugu baahan tahay si aad u gaarto himilooyinkaaga oo dhan oo aad ugu guuleysato tacliin ahaan labadaba dugsiga sare iyo kooleejka. Toddobaad kasta waxaan diiradda saari doonnaa fikrado gaar ah iyo shaqooyin maalinle ah oo dhammaystiran oo naga caawiya inaan baranno xirfado cusub oo ku saleysan fikradda. Waxaan baran doonaa xeelado badan oo barnaamijka AVID oo kaa caawin kara kaana taageeraya dhammaan fasalladaada waxbarasho intaad ku gudbeyso dugsiga sare. Ardaydu waxay u isticmaali doonaan qoraalada joornaalka maalinle ah sidii ay uga shaqeeyaan xirfada qorista, iyo inay noqdaan kuwa wax barta. Maaddaama aan shaqadeena ku shaqeyneyno khadka internetka waxaan u adeegsan doonnaa noocyo kala duwan oo aalado internetka ah si aan u taageerno waxbarashadeena. Waxaan u isticmaali doonaa Google Fasal ahaan boggayaga tacliinta ugu weyn, waana tan meesha aad ka heli karto dhammaan shaqooyinka maalinlaha ah. Aaladaha qaarkood ee aan adeegsan doonno waa Google Docs, Padlet, Flipgrid, dhejinta doodaha, iwm.
Sayniska Xilliga Xagaaga
Sidee bay bakteeriyada u caawin kartaa saynisyahannada forensiciska xallinta dambiga? Sidee xayawaanku u isticmaali karaan iftiin iyo guuxa codka si ay u khiyaaneeyaan ugagaarta u dhawaa? Maxaa ka dhigaya cudurkaan COVID-19 mid ka duwan fayrasyada kale? Casharkan degdegga ah ee 'Fast Track' ', waxaan u oggolaan doonnaa raadinta cilmiga ah ee nolosha sidii aan u sahmin lahayn arrimahan iyo mowduucyada kale! Waxaa laga yaabaa inaan nahay masaafada barashada, laakiin waxaan u isticmaali doonnaa ilaha fiidiyowga sidii safarro dalxiis oo aan ka soo uruurin karno oo ku soo bandhigi karno xogta gadaasheena gadaasheena carwada sayniska.
Guusha Dugsiga Sare
Barnaamijka “Fast Track” wuxuu ardayda siin doonaa luqadaha iyo xirfadaha looga baahan yahay inay ku guuleystaan dugsiga sare. Toddobaad kasta waxay heli doonaan mawduuc u gaar ah oo daboolaya aasaaska fikradaha iyo luqadda si looga caawiyo ardayda u gudubka dugsiga sare. Ardaydu waxay abuuri doonaan filimo, waxay qori doonaan buugaagta dhijitaalka ah, waxay ku baranayaan shaqooyinka dugsiga sare iyagoo adeegsanaya Google Docs, Slides, iyo Fasalka, waxay aadi doonaan safarro dalxiis, iyo waxay cayaari doonaan majaajlo la mid ah Kahoot ardayda ay wada dhigtaan ee Google Meets.
U Diyaarinta Dugsiga Sare iyo wixii ka dambeeya
Hadafka ugu dambeeya ee koorsadan ayaa ah in la hubiyo in ardayda ay horumariyaan xirfadaha lagama maarmaanka ah iyo caadooyinka shaqada si ay u dhammaystiraan shaqo tayo sare leh dugsiga sare iyo heerka kuliyadda. Ardeydu waxay sahmin doonaan xeelado waxbarasho oo kala duwan oo lagu dhisayo awoodooda lagu saadaalinayo xiisahooda aqooneed. Koorsadani waxaa loogu talagalay inay ka caawiso ardayda xoojinta adkeysiga caqliga, garashada, iyo xirfadaha shaqsiyadeed ee muhiimka u ah dugsiga, shaqada, iyo guusha nolosha. Ardaydu waxay baran doonaan hababka AVID. Nidaamyadan waxaa ka mid ah: qorista aalad loogu talagalay barashada, habka wax loo barto ee tilmaanta, barashada iskaashiga, istaraatiijiyadaha ururka, iyo istiraatiijiyadaha aqrinta. Waa mid muhiim u ah ardayda in ay ku celceliyaan oo ay horumariyaan xirfadaha barashada tacliinta iyo shucuurta-bulsheed maadaama kuwani u diyaariyaan inay noqdaan bartayaal nololeed oo dheer waxayna ka caawin doonaan inay ku guuleystaan hamigooda dugsiga sare ka dib.
Taariikhda Muusigga Hip Hop-ka
Koorsadani waxay sahmin doontaa mowduucyo waaweyn oo ku saabsan taariikhda muusikada Hip Hop. Dhaqanka Hip Hop wuxuu ka kooban yahay ugu yaraan afar waxyaabood oo waaweyn: Disc jockeying (DJing), qoob-ka-ciyaarka, farshaxanka qurxinta, iyo shiribka. Tan iyo markii ay soo baxday South Bronx iyo waqooyi-bari inta lagu gudajiray bilowgii iyo bartamihii 1970-meeyadii, Hip Hop kuma koobneyn kaliya muusig, laakiin sidoo kale qaab dhar xirashada, lahjad / luqad iyo sida adduunka loo eego. Fasalkani wuxuu eegi doonaa Taariikhda Hip Hop iyo sida uu u saameeyay bulshadeena. Ardayda waxaa laga filayaa inay qortaan, cilmi baaris ku sameeyaan, baaraandegaan heesaha, daawadaan dokumentiyada oo ay abuuraan qeyb farshaxan ah oo la xiriirta dhaqanka Hip Hop.
Xirfadaha Daraasaadka Bulshada HS:
Koorsadaan loo yaqaan "Fast Track koorsada" waxay raadineysaa inay ballaariso xirfadaha falanqaynta ardayda, xirfadaha qorista iyo sidoo kale hadalada fasalka. Ardayda ayaa aqrin doona oo falanqayn doona maqaallada gaagaaban ama fiirsan doona vidiyoga dhacdooyinka hadda jira ka dibna waxaa la weydiisan doonaa inay qoraan fikradaha joornaaliistaha ah, iyaga oo adeegsanaya fasalka google. Fasalku wuxuu la kulmayaa dhawr jeer usbuucii wakhti go'an si uu ugala hadlo shaqooyinka loo qabto isla markaana ay fursad u helaan inay ku mashquulaan macalinka iyo ardayga midba midka kale oo isla xiriiraan si ay wax uga qoran shaqooyinka. Mawduucyada la saadaaliyay, Coronavirus iyo qalalaasaha la socda, tusaalooyinka iskahorimaadyada bulshada dhexdeeda xilli dambe iyo dadaallada bulshada ee wax looga qabanayo arrimahaas bulsheed, iyo sidoo kale xididdada taariikhiga ah ee laxiriira isla arrimahan bulsheed.
injineernimada iyo naqshadeynta:
Fasalada Injineeriyada isku-dhafan iyo qaabeyn ka jawaabaya kartida iyo joogtaynta loo baahan yahay qarniga 21-aad. Wax kasta oo aad ugu baahan tahay waxaad ka helaysaa fasal ka yar 200 fiit oo laba jibaaran: waxay baranayaan aasaaska dhismaha, naqshada, dhismaha, iyo qorshaynta bulshada. Miyaad xiisaynaysaa inaad iskaashi la yeelato naqshadeeyeyaasha Minnesota, sida lataliyeyaal mashruuc dhisme ah oo aad naqshadeysid? Ardayda waxay fursad u leeyihiin inay doortaan aag taqasus fiirogaar ah oo ay ku jiraan: (1) Architect: naqshada Zero Net Energy Design; (2) Architect: Adeegsiga Mabaadi'da naqshadaha qadiimka ah; (3) Duulista Hawada: Naqshadaynta Geomeic Dome; (4) Naqshadeynta Cagaaran & Dhismaha; ama (5) Sahaminta Qorshe Magaalada.